Momba anay - Hebei Chaoyue Standard Fastener Mould Co., Ltd.
Hebei Chaoyue Standard Fastener Mould Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2008,
miorina amin'ny faritra indostrialy zhaogeda ao amin'ny tanàna beihan renqiu Hebei. Mpanamboatra bobongolo boribory manokana sy mpamolavola famolavolana moulds. Amin'ny fampiasam-bola mitentina 5 tapitrisa dolara amerikana, velarana velarana 12800 m2, faritra atrikasa famokarana 7200 m2. Akaikin'i Beijing manodidina ny 150km, Tianjin manodidina ny 100km.
INTEGRITY, TALENTS, GOOD QUALITY, WIN-WIN, CUSTOMER SERVICE, mifikitra amin'ny filozofia orinasa. Natokana ho an'ny indostrian'ny fasteners ary manome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra amin'ny kalitao tsara sy serivisy tsara indrindra.
Ireo tsipika famokarana dia miaraka amina masinina milina famafazana PVD avo lenta nampidirina avy any Etazonia.
Fitaovana hafa mifanaraka aminy mba hampidirana tsipika famokarana feno, toy ny lathes CNC, grinder automatique, press cnch punch, lafaoro manamafy vaksiny, ary milina CNC hafa. fitaovana fitiliana hafa, hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra. Manana ekipa teknika matanjaka sy ekipa mpitantana izahay, ary nampiasa ny fizotry ny famokarana fanaraha-maso ny solosaina, amin'ny fampiharana ny fitantanana orinasa maoderina. Manararaotra ny rindrambaiko farany toa ny CAD / CAM, Solidworks izahay , hanatanterahana ireo haitao mandroso ataon'ireo injeniera zokiolona, ​​manam-pahaizana momba ny fitsaboana hafanana matihanina ary mpamolavola mahay.
Ny orinasa dia hetsika lehibe ao amin'ny R&D
famokarana sy fivarotana lohana lohan-doha amin'ny tiana miaraka amina lasitra TiAIN ary mamorona bobongolo. Ny fenitry ny GB, JIS, ANSI, DIN, BS, ISO. Ny lohan'ny loha dia ao anatin'izany ny Phillps, Slot, Pozi, Hexagon, Torx. Fahaizana famokarana isan-taona hatramin'ny 2.5 tapitrisa ho an'ny paompy faharoa mahazatra. Ankoatr'izay, miezaka hatrany izahay hamorona famoronana sy hamolavola mba hamolavolana bobongolo azo antoka kokoa, ary nahazo laza tsara eny an-tsena, indrindra ny tsindry faharoa ho an'ny volo fanamainana, JDW 270F, loko mainty 12 * 25, ny famokarana visy manodidina ny 150.000-180,000.
Ny vokatra dia manarona ny totohondry faharoa, Main die,
Punch voalohany, Cutter die, Cutter antsy, Knock-out pin, Thread rolling die, Triring die, Wire drawing die. Ny bobongolo rehetra ho an'ny volom-baravarankely, visy chipborad, visy masinina, fantsom-bokotra, visy hazo, visy fandavahana tena, bolt sy voanjo . Ho fanampin'ireo fenitra mahazatra ireo. Ny bobongolo tsy mahazatra dia azo omen'ny mpanjifa manao sary sy mangataka.
Safidio ny mooy Chaoyue. Mampihena ny sakana sy ny vidiny amin'ny famolavolana ny famokarana sy ny endrikao izahay.
Ny fahafaham-ponao dia ny fikatsahana mandrakizay ny mpiasan'ny Chaoyue rehetra, vonona izahay ho mpiara-miasa azo antoka sy namana marina.